Khudbad dhif ah oo uu u jeediyay UN-ka, Boqor Salmaan wuxuu ku booriyay quwadaha adduunka inay wax ka qabtaan ‘howlaha balaadhinta’ ee Tehran.
Boqorka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan Bin Cabdulcaziiz ayaa weerar afkaa ku qaaday Iran intii lagu guda jiray kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Arbacadii shirkii sanadlaha ahaa ee Qaramada Midoobay ee hogaamiyaasha adduunka, isagoo ku baaqayay in xal buuxa loo helo xakamaynta gobolka ee ku tartamaya helitaanka hubka wax gumaada.
Waxa uu sheegay in Iran ay ka faa’iideysatay heshiiskii Nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay la gashay quwadaha adduunka “si ay u xoojiso howlaheeda isballaarinta, abuurista shabakadaheeda argagixisada, una adeegsato argagixiso”, isagoo intaa ku daray in taasi aysan soo saarayn wax aan ka aheyn “fowdo, xagjirnimo, iyo kooxaysi”.
“Xal dhammaystiran iyo mowqif adag oo caalami ah ayaa loo baahan yahay,” ayuu u sheegay 193-ka xubnood ee Golaha Guud warbixin qoraal ah. Khibradayada aan u leenahay taliska Iran waxay na bartay in xalka iyo qancinta qeyb ahaan aysan joojin qatarta ay ku yihiin nabada iyo amaanka caalamiga. ”
Afhayeenka Ergada Qaramada Midoobay ee Iran Alireza Miryousefi ayaa diiday waxa uu ugu yeeray “eedeymaha aan salka laheyn”.
“Hadalka aan wax dhiska lahayn ee aan loo baahnayn ee hogaamiyaha Sacuudiga wuxuu kaliya dhiira gelinayaa awoodaha qaarkood ee doonaya in ay khilaaf ka dhex abuuraan wadamada gobolka iyadoo ujeedadu tahay abuuritaanka kala qaybsanaan joogto ah iyo in gobolka laga iibiyo hub badan oo dilaa ah,” ayuu yiri. .
Sucuudiga oo u badan Muslimiin Suniyiin ah iyo Iran oo u badan Shiicada mayalka adag ayaa ku xiran dagaallo dhowr ah oo ka dhacay gobolka, oo ay ku jiraan Yemen halkaas oo xulafada uu Sacuudigu hoggaamiyo ay la dagaallamayaan kooxda Xuutiyiinta ee Tehran la midoobay muddo shan sano ka hor ah.
Boqor Salmaan, oo 84 jir ah, ayaa sheegay in Bariga Dhexe ay la soo dersayeen caqabado waaweyn oo siyaasadeed iyo amni, isagoo ku eedeeyay Iiraan xasilooni darrada ka jirta gobolka intiisa badan. Wuxuu sidoo kale ku eedeeyay kooxda Xisbullah ee Iiraan taageerto ee ka dhisan Lubnaan in ay abuureen jahwareer siyaasadeed oo ugu dambeyn lagu eedeeyay qaraxii ba’naa ee ka dhacay dekedda Beirut bishii hore.
“Ururkan argagixisada waa in hubka laga dhigaa,” ayuu yiri boqorka.
Hillary Mann Leverett, oo ah sarkaal hore oo Mareykan ah ahna agaasimaha guud ee la talinta halista siyaasadeed ee STRATEGA, ayaa xusay in boqor Salmaan uu hadaladiisii ​​ku saabsanaa Iiraan ku qoray “xoogagga sharta”, isaga oo intaa ku daray in Sacuudi Carabiya ay wali xanaaqsan tahay weerar “aan jawaab laga bixin” oo lagu qaado xarumaha saliidda ee boqortooyada. sanadkii hore taas waxaa lagu eedeeyay Tehran.
“Taasi waxay sii ahaaneysaa meel xanuun badan oo uu muujiyo boqorka Sacuudi Carabiya ka hor inta adduunka oo dhan ay muujinin ahmiyada uu wali boqorka u siinayo sida Mareykanku u maareeyo Iran iyo siyaasadiisa gobolka,” Mann Leverett ayaa u sheegay Al Jazeera . “Waa su’aal ku saabsan in maamulka Trump runti uu difaaci lahaa haddii wax iyaga ka sii xun ay ku dhacaan iyaga.”
Isaga oo akhrinaya warqad yar fadhiyana miis ka hooseeya sawirka weyn ee aabihiis, Boqor Salmaan wuxuu ku celiyay doorka muqadaska ah ee Islaamku ku leeyahay Sacuudi Carabiya, oo ay muslimiintu rumaysan yihiin in Nebi Muxamed NNKH lagula soo dajiyay diinteena suuban ee Islaamka godad ku yaalla buuraha Maka 1,400 oo sano ka hor.
Wuxuu ka gaabsaday inuu dhaleeceeyo heshiisyadii dhowaan ay wada galeen Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE) iyo Baxrayn ee ahaa in ay xiriir la yeeshaan Israel. Laakiin markii la isku dayay in la dhexdhexaadiyo nabadda u dhaxeysa Israa’iil iyo Falastiin, boqorka Sacuudiga wuxuu sheegay in hindisaha nabadeed ee Carabta ee 2002 uu aasaas u yahay “xal dhameystiran oo cadaalad ah” si loo hubiyo in Falastiiniyiinta ay helaan dowlad madaxbanaan oo Bariga Qudus tahay caasimadooda.
“Waxaan taageersanahay dadaalada maamulka hada jira ee Mareykanka si loo gaaro nabad ka dhalata Bariga Dhexe anagoo Falastiin iyo Israel isugu keenay miiska wada hadalka si loo gaaro heshiis cadaalad ah oo dhameystiran,” ayuu yiri Salmaan.
Sacuudi Carabiya, oo ah halka ay ku yaallaan goobaha barakaysan Islaamka sida magaalooyinka Maka iyo Madiina, ayaan la ogayn waxa ay ka yeelayso xiriirka cusub ee u bilaawday wadamada Carabta iyo Israel hayeeshee waxa ay la wadaagtaa wadamada la heshiiyay Yuhuuda, Iran nacaybka iyo taageerada Maraykanka.
Hogaamiyaasha Falastiiniyiinta ayaa cambaareeyay heshiiska Imaaraatka iyo Baxrayn ee xiriirka ay la leeyihiin Israa’iil, waxayna ku tilmaameen khayaanada dadaalkooda si ay ugu guuleystaan ​​dowladnimada Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza.
Mann Leverett wuxuu xusay in ay jiraan warbixino ku saabsan khilaafaadka ka dhex jira qoyska boqortooyada, gaar ahaan u dhexeeya Boqor Salmaan iyo Dhaxal Sugaha Boqortooyada Maxamed Bin Salmaan, oo ku saabsan in Sacuudi Carabiya ay raaci doonto kuwa kale ee gobolka iyo in ay xiriir caadi ah la yeelato Israel.
“Marka tani waxay ahayd fursad si guud loo soo bandhigo ka hor intaan dunidu ku celin mowqifka dheer ee Sacuudi Carabiya… in loo baahan yahay in la helo laba dowladood – dowlad madax-bannaan oo Falastiin leh caasimaddeeda Bariga Qudus. Taasi waa cadeyn cad oo ku saabsan mowqifka Sacuudiga iyo diidmada dhabta ah ee dadaalada hada socda ee lagu riixayo dowladaha carabta si ay ula jaan qaadaan Israel. Taasi waxay ahayd mid muhiimad leh, ayay yiri.
Washingtontimes:-Wadaxaajoodka Al-Shabaab waxaa loo arkaa waddo lagu soo afjarayo dagaallada ka socda Soomaaliya!